Baydhabo oo la dhowrayo Warkeeda !
Tuesday June 05, 2018 - 07:34:28 in Wararka by Super Admin
Waxaa la wariyay haweenay Soomaalidii hore ah oo dhashay 8 wiil oo lagu xaman jiray in xagga cagliga ay ka hooseeyeen bulshada ay la noolaayeen isla mar ahaantaana xoolo badnaa ayaa markii Aabahood god aakhiro u hoy'day ay ka baqday in xoolaha l
Waxaa la wariyay haweenay Soomaalidii hore ah oo dhashay 8 wiil oo lagu xaman jiray in xagga cagliga ay ka hooseeyeen bulshada ay la noolaayeen isla mar ahaantaana xoolo badnaa ayaa markii Aabahood god aakhiro u hoy'day ay ka baqday in xoolaha laga dareersado oo la mooro-duugo. Maamadu intay wiilasheedii isugu yeertay ayay tiri "hooyo afka isa saarsaara si loo moodo inaad tashanaysaan oo cadawgu idiinka baqo".
Hadeer Soomaaliya oo dhul qani ah cadaw badanna uu ku xeeranyahay ayaa madaxdii ugu saraysay ay bilba magaalo afka isku saarsaarayaan, wax aan is aragga iyo sheekaysiga ahayn ooy soo kordhiyaanna ma jiraan. Sidaasi darteed sow lama oran karo madaxdeenu dardaarankii hooyada Soomaaliyeed ayay hirgalinayaan?
Shirka Baydhabo oo dadku aad dhagta ugu taagayaan ayay aqoonyahanka iyo dadka waayaha badan u soo joogay arimaha siyaasadda Soomaaliya ay ku macnaynayaan war laqabo xiiso ma leh, maadaama go’aamada ka soo bixi doona ay lamid ahaan doonaan go’aamadii ka soo baxay dhamaan shirarkii ka horeeyay oo noociisa oo kale ahaa.